अमिताभ बच्चनको कोरोना टेस्ट नेगेटिव आएको समाचार गलत उनले ट्वीट गरेर यसो भने ! -
अमिताभ बच्चनको कोरोना टेस्ट नेगेटिव आएको समाचार गलत उनले ट्वीट गरेर यसो भने !
२०७७, ८ श्रावण बिहीबार १८:२१ July 23, 2020 clickonLeaveaComment on अमिताभ बच्चनको कोरोना टेस्ट नेगेटिव आएको समाचार गलत उनले ट्वीट गरेर यसो भने !
बलिउड मेगास्टार अमिताभ बच्चन हाल मुम्बैइको नानावटी अस्पतालमा कोरोना भाइरस बिरूद्ध लडाई लड्दैछन्। अमिताभलाई १३ दिनसम्म अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। उनका फ्यानहरू निरन्तर उनको स्वास्थका लागि प्रार्थना गरिरहेका छन्।
यसैबीच, सोशल मीडियामा उनको बारेमा एउटा खबर भाइरल भैरहेको छ कि बिग बी को कोरोना भाइरसको टेस्ट नेगेटिभ आएको छ र उनलाई छिट्टै अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिने छ। बिग बी आफैले ट्वीट गरेर यी सबै समाचार को सत्यता बारे भनेका छन ।
बिग बीले आफ्नो ट्विटरमा यस समाचार को खंडन गर्दै बीले यस्तो लेखेका छन, ‘यो समाचार गलत, गैरजिम्मेवारपूर्ण, नक्कली र गलत हो’।कोरोनाभाईरसबाट पिडित अमिताभ ११ जुलाईमा मुम्बैइको नानावटी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए।
अमिताभ पछि अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राई र आराध्या बच्चनको कोरोना रिपोर्ट पनि पोजेटिभ आएको थियो । अमिताभ बाहेक अरु जना जना नानावटी अस्पतालमा भर्ना छन्। यद्यपि सबैको स्वास्थ्य पहिले भन्दा धेरै राम्रो छ।
विश्व नेताहरू आफैं संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा नगई आफ्नो भाषणको भिडियो बनाई पठाउने
प्रधानमन्त्रीको अयोध्या सम्बन्धी बक्तब्य के को आधारमा हो भनी सांसदहरू द्वारा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा प्रश्न
धेरै पछी बलिवुड अभिनेता शुनिल शेट्टी छुट्टै भुमिका मा, चलचित्र “पहलवान” [ट्रेलर]
२०७६, ७ भाद्र शनिबार ०१:३२ August 24, 2019 clickon
हिजो मात्र चोपेन्द्र र रनकला को अर्को भिडिओ आयो फेरि, हेर्नु भयो??
२०७५, २ माघ बुधबार ०३:०३ January 16, 2019 clickon
रवि ओडले जिते दोस्रो नेपाल आइडलको ट्रफि
२०७५, ६ पुष शुक्रबार २२:३३ December 21, 2018 clickon